Olana sedrain’ireo malagasy maro manan-talenta manerana ny nosy ny tsy fisian’ny sehatra hahafahan’izy ireo maneho ny kantony. Tsy mbola mahasahana ny ivon-toerana hampafantarana ireo mpanakanto eto Madagasikara ny isan’ireo sehatra ara-kolotoraly misy eto an-toerana. Ho famahana io olana io indrindra, nanantona ireo mpanakanto sy mpisehatra amin’ny kolontsaina ny Ministera tomponandraikitra omaly, ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Ilaina ny tosika amin’ny fanomezana sehatra ivelarana tahaka izao, hoy ireo mpanakanto, ho fitsinjovana ireo tanora vao misandratra. Maniry ny hitoizan’izany ireo mpisehatra eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina sy zava-kanto.
Ny ofisim-pirenena misahana ny zava-kanto sy ny kolontsaina na ny OFNAC no hitantana ny io City Art notokanana omaly teo Ivandry io. Entina hanohanana ireo tanora vao misondratra ny vola rehetra ho azo amin’izany.